युगसम्बाद साप्ताहिक - काठमाडौंको कष्ट फोहर
Saturday, 04.04.2020, 07:11am (GMT+5.5) Home Contact
काठमाडौंको कष्ट फोहर
Tuesday, 09.11.2018, 12:27pm (GMT+5.5)
काठमाडौं उपत्यकाका शहरबासी हुन वा गाउँबासी सबैको एउटै कष्ट छ– सडकको दूरावस्था र फोहरको दुर्गन्ध । एकातिर धुलो र हिलो सडक अनि त्यही सडक किनारमा थुप्रिएको फोहोरको डंगुरले उपत्यकाबासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ भने शहरको सौन्दर्य नै हराएको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय दृष्टिकोणले विश्वका उत्तम शहरहरूमा गनिने काठमाडौं उपत्यका विगत एक दशकदेखि अत्यधिक प्रदूषित र कुरुप बन्दैछ । विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरमा गनिन्छ काठमाडौं । मन्दिरै मन्दिरको शहर फोहरै फोहरको थुप्रोले पुरिएका छन् । सांस्कृतिक धरोहरू आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि गुहार मागिरहेका छन् । तर जिम्मेवारी लिएर ओहदामा बसेकाहरूको कानमा बतास पस्दैन । फोहरमैला बाहिरबाट हेर्दा एउटा समस्या हो, तर यसभित्र अनगिन्ती समस्याहरू जेलिएर रहेका छन् । फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न हुने अनेक समस्याहरूको लेखाजोखा नै छैन । फोहरमैलाको थुप्रोबाट उत्पन्न हुने दुर्गन्ध, त्यसबाट उत्पन्न हुने रोगव्याधीसंगै वातावरणीय दुष्प्रभावबाट उत्पन्न हुने अनेक समस्याहरूले नेपाली जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको भए पनि त्यस दिशातिर पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । वातावरण प्रदूषित हुनासाथ यसको असर खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र आर्थिक क्षेत्रमा समेत पर्दछ ।
फोहरलाई मिल्काउने बस्तु ठान्नु नै महाभूल भएको छ । फोहरलाई मोहरमा परिणत गर्न सकिन्छ भनेर धेरै विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् । फोहरमैलाबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्इ प्रमाणित भैसकेको छ । राजधानीमा उत्पादन हुने फोहरमैलामध्ये ७० प्रतिशत पुनः उपयोग गर्नसकिने खालको रहेका फोहरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले नै बताएको छ । अर्कोतिर महानगरपालिका पनि यसको बहुउपयोगमा जानुपर्ने कुरा बेलाबेलामा ओकल्ने गरे पनि समय वित्दै गएपछि त्यो विषयले प्राथमिकता नै पाउँदैन । हाम्रो मुल समस्या भनेको फोहरमैलालाई स्रोतको रुपमा नलिएर समस्याको रुपमा लिने र यसलाई ‘डम्पिङ’ गर्ने बाहेक अर्को योजना र नीति नबन्नु पनि हो । अर्कोतिर हरेक कुरामा राजनीतिकरणको मार त संगसंगै जोडिएकै छ ।
वातावरण प्रदूषण, नदी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषणको चर्को मारमा परेको काठमाडौं उपत्यका यतिबेला निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । राजधानी उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ राख्न, यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यहाँको कला, संस्कृति र मौलिक चिनारी बचाइराख्न उपत्यकालाई फोहरमैला मुक्त राख्नैपर्छ । कला, संस्कृति, साहित्य र प्राकृतिक सुन्दरताको मुहान मानिने काठमाडौं उपत्यका जहिले पनि फोहरमैलाको थुप्रोले पुरिनुपर्ने दुर्दिनको अन्त्यका लागि सवैको प्रयास आवश्यक छ ।
काठमाडौंमा घोषितरुपमा गाउँ छैनन् अनि मुलुकको जेठो महानगरपालिका र राजधानीमा अहिले जस्तो अवस्था छ त्यसले यो राजधानी हो भन्न गाह्रो पर्छ । कुनै देशको राजधानी यति धुलो, हिलो र फोहरले भरिएला भन्ने कसैको अनुमानभित्र पर्र्दैन तर यथार्थ यही हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि सबैले स्मार्ट सिटीको नारा घन्काए, फोहर व्यवस्थापन गरी ग्यास निकाल्ने योजना सुनाए, सडक चिल्ला र सफा हुने योजना बाँडे अनि सय दिनमा काठमाडौं धुलो र हिलोमुक्त हुने कथा सुनाए तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि यी कुनै काम भएनन् ।
सडकको अवस्थाबाट वाक्कदिक्क काठमाडौंबासी फोहरको समस्याबाट पनि आक्रान्त छन् । उपत्यकाको सबभन्दा ठूलो समस्या हो फोहरमैला व्यवस्थापन । अर्कोतिर दीर्घकालीन डम्पिङ साइट समेत व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । उचित थलोको खोजी हुनै सकेको छैन । फोहरमैला व्यवस्थापनमा महानगपालिका र सबै नगरपालिकाहरुबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यस्तो छैन । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हातेमालो गरेर अघि बढ्नुको साटो आआफ्नै तालमा यसो भएन र उसो भएन भनेर चिच्याउने बाहेक जनप्रतिनिधिहरुबाट केही भएको छैन ।
शहरका चोक र खाली ठाउँमा थुप्रिएका फोहोरले ती ठाउँमा बस्ने र व्यापार गर्नेहरु वाक्कदिक्क छन् । उनीहरुको एउटै गुनासो छ किन फोहर व्यवस्थापनमा यति लापरवाही ? अर्कातिर फोहर जथाभावी मिल्काउनु हुँदैन भन्ने सामान्य चेतना पनि नगरबासीमा नभएको जस्तै देखिन्छ । सभ्यताको सबभन्दा घृणित दृश्य फोहर व्यवस्थापनमा देखिएको स्थानीय निकाय र ती निकायबासीको व्यवहारले देखाउँछ । घरको फाहोर सडकमा मिल्काउने बानी हामी सबैमा छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरुलाई मात्र दोष दिएर कोही उम्कन भने पाउँदैन । हामी आफू कति सफा छौं र सफाईप्रति कति सचेत छौं भन्ने स्वमूल्यांकन अहिलेको आवश्यकता भएको छ । हामीले आफ्नो घर आफैं फोहर त गरिरहेका छैनौं वा आफ्ना लागि आफैंले रोग त निम्त्याइरहेका छैनौं भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा छ ।
नगर वा शहर सफा राख्ने पहिलो दायित्व नगरबासीको पनि हो भन्ने हामीले बिर्सेका छौं । सबै काम नगरपालिकाले गरिदिनुपर्ने गलत मानसिकता बोकेर बसेका कारण हाम्रो शहर फोहरमा परिणत भएको हो । यस्तो मानसिकता कायम रहँदासम्म यस्ता समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छन् ।
हो, गर्नुपर्ने निकायले ध्यान नदिएकै हो, नसकेकै हो, उनीहरुले दीर्घकालीन सोच नराखेकै हो । जनताको सेवा सुविधामा भन्दा आफ्नै सुविधामा मात्र चासो दिएकै हुन् । यसो भन्दैमाा नागरिक दायित्व हामीले बिर्सनु हुँदैन । यसो भन्दैमा महानगर वा नगरपालिकालाई दोषमुक्त ठह¥याउन सकिन्न । उनीहरुको अकर्मण्यता त कति हो कति ? स्मार्ट सिटीको नारा घन्काएर शहर स्मार्ट बन्दैन, त्यसका लागि त्यस्तै कर्म गर्नुपर्छ भन्ने चासै छैन । हाम्रो दुर्भाग्य यही हो ।
राजधानीको मुख्य आकर्षण भनेको पर्यटकीय स्थलहरू नै हुन् । सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ । यस्तै अवस्थाले आउलान त्यति पर्यटक ? पर्यटकीय स्थलहरु पुग्ने सडकको अवस्था । ती स्थलहरू फोहरमैलाको थुप्रोको बीच पर्यटक आगमनकोा कल्पना गर्नु कति उचित होला ? फोहरमैला व्यवस्थापन शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन सवै क्षेत्रको चासोको रुपमा रहनुपर्छ । यी सवै निकायको सामूहिक पहल र प्रयासले मात्र राजधानीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा पार्न सकिन्छ । तर यस दिशातिर कसैको ध्यान पुगेको छैन ।